> Resource > Flash Drive > Recovery ah Barzakh, USB: Sidee inuu ka soo kabsado ah Barzakh, USB
Waxaan soo kaban karto, Xogta laga masaxay ah Barzakh, USB?
Waxaan leeyahay ka flash drive USB 16GB iyo waxaan si qalad ah la tirtiro Risaalo. Hadda fl USB wuxuu noqon karaa mid lagu ogaan by my computer laakiin muujinaysa nidaamka qaab cayriin la 0 byte awoodda. Waxaan aaminsanahay in xogta weli waa ku wadid iyo waxa uu kaliya ka maqan miiska xijaab. Ma suroobi karaa waddo inuu ka soo kabsado xijaab USB? Run ahaantii waxaan u baahan tahay si aad u hesho xogta ka dib. Mahadsanid.
Risaalo USB lagu lumin karaa sabab u mudooyinka kala duwan, sida tirtirka, formatting, nidaamka file musuqmaasuqa, jeermiska fayraska ama dhibaatooyin la mid ah. Nasiib wanaag, khasaaraha xijaab USB noqonin mid horseeda in khasaaro xogta joogta ah. Xogta ku saabsan xijaab USB wali waa la soo saari karaa haddii aadan wareejiyo wixii macluumaad cusub oo aad USB.
Marka uu aqrinayo USB khasaaro xijaab, waxaad u baahan tahay in talaabo degdeg ah oo raadi barnaamij soo kabashada xijaab USB hufan. Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa barnaamij awood leh oo awood u siiyaa in aad ka bogsato lumay, tirtiray, formatted, ama kharribeen qoruhu USB. Sidaa daraadeed, waxaad soo kaban karto, dhammaan xogta ku kaydsan aad xijaab USB lumay, oo ay ku jiraan images, videos, waraaqaha, files audio, files archive, iwm Waxaa la socon kara oo dhan magac USB sida Kingston, SanDisk, ajende iyo in ka badan.
Waxaad kala soo bixi kartaa version tijaabo ah inuu ka soo kabsado xijaab USB hadda!
Qabtaan Recovery ah Barzakh, USB in 3 Talaabooyinka
Tilmaan USB kabashada xijaab ku salaysan yahay Windows version of barnaamijka Wondershare Data Recovery, taas oo uu leeyahay hawlaha la mid ah la version Mac. Si aad u soo kabsado xogta laga tirtiray xijaab USB, fadlan hubi in aad drive USB weli waxaa laga garan karaa your computer.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada ah si ay u bilaabaan soo kabashada xijaab USB
Kadib markii ay Wondershare Data Recovery aad pc, waxaad heli doontaa interface ah sida hoos ku image.
Si aad u soo kabsado xijaab USB, waxaad dooran kartaa "kabashada ah Barzakh," mode si ay u bilaabaan. Hab Tani baaritaano xijaab laga badiyay ku wadid aad USB iyo kabanayso files laga badiyay ka.
Tallaabada 2 Scan xijaab laga badiyay ku wadid aad USB
Waxaad u baahan tahay in ay doortaan wadid aad USB in iskaan u qoruhu waxa on hore.
Markaasaa qoruhu ku wadid aad USB la ogaan doonaa oo muujiyey in uu furmo barnaamijka. Waxaad dooran kartaa Risaalo ka lumay oo guji "Start" si ay u bilaabaan baar files waxa on.
Tallaabada 3 Ladnaansho xijaab USB
Marka gool scan ah, dhammaan waxyaabaha aad xijaab USB badiyay lagu soo bandhigi doonaa in uu furmo. Waxaad ka arki kartaa magacyada file helay in lagu hubiyo sida badan faylasha lagu soo kabsaday kartaa xijaab USB lumay.
Markaas oo keliya u baahan tahay in aad dooratid faylasha aad rabto in aad dib u soo ceshano oo guji "Ladnaansho" si ay u badbaadin Barzakh / drive on your computer.